Madaxweyne Farmaajo oo dhiggiisa dalka Uganda kala hadlay arrimo muhiim ah (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo dhiggiisa dalka Uganda kala hadlay arrimo muhiim ah (SAWIRO)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda kullan kula yeeshay dhiggiisa dalkaasi Yoweri Museveni, iyagoona kullankooda uga hadlay arrimo muhiim ah oo ay ka mid tahay dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto xasillinta, iskaashiga, dhaqaalaha iyo horumarka labada dal.
Madaxweyne Farmaajo oo magaalada Kampala uga qeyb-galay shir looga hadlaayay arrimaha qaxootiga ayaa uga mahad-celiyay dowladda iyo shacabka Uganda sida wanaagsan ee ay usoo dhaweeyeen qaxootiga Soomaaliyeed, wuxuuna tilmaamay kaallinta aan marnaba la ilaawi karin ee ay Uganda ka geysatay nabad ilaalinta Soomaaliya.
“Dowladda Uganda, waxaan leennahay iskaashi iyo xiriir qoto dheer, waxaana uga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo ay usoo dhaweeyeen qaxootiga Soomaaliyeed, dowladda Uganda waxay mar walba noola garab taagan tahay dadaalka aan ugu jirno xasillinta iyo nabadeeynta dalka Soomaliya” Sidaasi waxa yiri Madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dhiggiisa dalka Uganda ay isla garteen sidii looga wada shaqeyn lahaa xoojinta arrimaha dhaqaalaha islamarkaana labada dal xiriirkoodu aanay ku koobnaan doonin oo kaliya amniga, balse ay bilaabayaan xiriir cusub oo dan u ah labada dowladood.
Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Uganda Yower Museveni ayaa bogaadiyay hoggaanka cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadaalka dheeriga ee ay kula dagaalamayaan musuq-maasuqa, nabadgalyo xumada iyo faqriga.
Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa ugu dambeyn ballan ku qaaday in dalkiisa uu mar waliba xoojin doonno iskaashiga labo geesoodka ah ee kala dhaxeeya dalka Soomaaliya, islamarkaana ay taageero walaaltinimo ugu muujin doonto dowladda federaalka Soomaaliya.